Shil tareen oo maanta gelinkii dambe ka dhacay magaaladda Göteborg | Somaliska
Shil aad u xoogan ayaa maanta gelinkii dambe waxaa uu ka dhacay faras magaalaha magaaladda Göteborg maanta gelinkii dambe. Ugu yaraan sagaal ruux ayaa lugu soo waramayaa inuu dhaawac ka soo gaartay shilkaasi. Shilkan tareen ayaa yimid ka dib markii mid ka mid ah tareenkaas uu ka baxay wadadii uu ku socday, taasina eey keentay ineey is dhinac jiiraan tareenkii kale ee geestiisa marayey.
Dadkan dhaawacmay ayaa loola cararay isbitaalada inkastoo wararka laga helayo isbitaalada ay sheegeen indadka dhaawaca soo gaaray ay ahaayeen sadex ruux oo dhaawac fudud soo gaaray. Kooxaha gurmadka deg dega iyo booliska oo soo gaaray goobta iyadoo ay saacado badan dhamaan gaadiidka sida basaska iyo tareenadda ee marayey Nordstan oo ah halka labadda dareen ay fooda is dareen.
Dadweynaha dhaawaca soo gaaray ayaa qaarkood waxaa ay ahaayeen kuwo marayey wada hareeraheeda. Waxaana qaarkood ku dhacday naxdin iyo shoog ay ka qaadeen shilka labada dareen. Daqiiqado ka hor ayaa waxaa dib u howlgalay gaadiidka maanta gelinkii dambe gebi ku yimid hakadka.
Ma ahan markii ugu horeeysay ee shil tareen ka dhaco magaaladda Göteborg. Hase ahaatee kani waa kii ugu horeeyey ee sanadkan 2017-ka ka dhaca magaaladda saameeyna ku yeesha isku socodka gaadiidka dadweynaha.